Fiidiyeyaasha si ay u bartaan AutoCAD, bilaash! - Geofumadas
Fiidiyeyaasha si ay u bartaan AutoCAD, bilaash!
Febraayo, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS
Tani waa kheyraad qiimo leh si ay u bartaan AutoCAD fiidiyoow, kuwaas oo hadda xor ah, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa isdiiwaangalin. Shaki la'aan waxay noqon doontaa caawimaad weyn oo loogu talagalay kuwa doonaya inay bartaan sida loo adeegsado AutoCAD ka soo jiidasho leh thanksCADFast.com.
Waxaa loo kala qaybiyaa ugu yaraan qaybo 5, midda ugu horeysa ee loo jeedo dhinacyo hordhac ah, labada xiga ee dhismaha xogta iyo kuwa ugu dambeeya ee dhismaha layliga ee xittaa sawirka qaabka pdf si loo soo dejiyo:
A. Muujinta Video ee AutoCAD, mabaadi'da asaasiga ah
1. Hordhaca AutoCAD
Qaybtani waa hordhac guud oo loogu talagalay AutoCAD, sida kuwa bilaabaya xoqida. Waxaa ku jira sharraxaad sida maareynta maareynta, iskuduwaha, qalabyada iyo mawduucyada aasaasiga ah.
2. Sameyso sawir cusub
Qaybtani waxay sharraxaysaa sida loo abuuro sawir cusub, qaabeynta unugga iyo goobta shaqada. In qaab abuurka horumarsan, cutubyada, saxda ah iyo xaglaha waxaa lagu sharaxay kala duwanaanshahooda kala duwan.
3. Qaybaha cabbirka
Fiidiyowgu wuxuu sharraxayaa sida AutoCAD u xakamayso qaybaha cabbirka qiyaasta iyo xaglaha.
4. Nidaamka Isku-xirka ee AutoCAD
Halkan waxaan ku sharxeynaa sida loo dhigo dhibcooyinka laga bilaabo barta asalka iyadoo la isticmaalayo xagal qaas ah.
5. Xakamaynta xakamaynta
Fiidiyowgu wuxuu ka kooban yahay sharaxaad ku saabsan sida loo dejiyo guryaha qabashada si loo saxo waxa loo yaqaan 'snap'.
6. Hababka xulashada
Halkaan waxaad ka arki kartaa siyaabaha kala duwan ee lagu kala dooran karo shakhsi ahaan ama dhowr.
7. Xulashada sifooyinka
Tani waa sharaxaadda sida loo doorto shayada ku saleysan sifooyinka sida midabka, lakabka, nooca shay, iwm.
8. Isticmaalka sheybaarada
Fiidiyowkani waxaa ka mid ah xulashada mawduucyada loo qaabeynayo unugyada shaqada, noocyada xarumaha, ilaha, iwm.
B. Dhismaha walxaha
Qaybtani waxay ka kooban tahay amarrada ugu badan ee loo adeegsado sawirrada "AutoCAD".
C. Amarrada wax ka beddelidda
Qeybta saddexaad waxaa ku jira fiidiyowyo dhowr ah oo loo isticmaalo wax ka beddelidda walxaha.
La sii wado
Si aad u guurto
Dhexdhexaad (isku mid ah)
Qaybi oo cabir
Iskuday iyo dhaqaaq
D. Jimicsiyada AutoCAD
Qaybtan afraad waxaa ku jira taxane taxane ah oo adeegsanaya amarrada kala duwan ee hore loo sharraxay.
Sawir dhegta riix
Sawir jilbaha C
Sawirida xaraf 3D
F. Farsamooyinka sare ee fiidiyowga ee AutoCAD
Halkan waxaa ku yaal tirooyin adag oo ku yaal 3D
Mid ka mid ah hal
La-talin, xayiraad, dulsaar
Post Previous«Previous Sida loo helo hoteelka 50 ee Barcelona
Post Next Daryeelka xarun guudNext »
22 Jawaab in "Fiidiyeyaasha lagu barto AutoCAD, bilaash!"
Gerardo zuñiga isagu wuxuu leeyahay:
Haa, cajaladahaaga waxbarashadu waa kuwo aad i xiiso leh haddii aad haysatid fiidiyowyo ku saabsan sida loo sameeyo sahan la jaan qaadayo
Agoosto, 2012 at
Noloshaani waxay u baahan tahay dadaal, sida aad adigu sameyso dadaalka aad ku bixineyso xirfaddaada kuleejka, waxaa jira siyaabo aad ku baran karto isticmaalka barnaamijyada laakiin waxay weli u baahan yihiin dadaal:
-Waxaa jira, haddii aad is baratay, waxaa jira barnaamijyo farsamo oo bilaash ah oo ku saabsan internetka oo aad wax ku baran karto.
-Sida kale waa inaad bixiso koorso saaxiib la ah, oo ku sifooba barnaamijka oo ku baraya caymiska, laakiin sida ugu dhaqsaha badan waa inaad maalgelisaa wakhti iyo hubaal ahaan dhaqaale dhaqaale wakhtiga uu ku siinayo.
- Mid kale waa inuu kooraska ka qaato magaaladaada.
Sidaas oo ay ahaato, maalgashiga waxbarashada ayaa wax soo saar leh. Wax barashada ka hor qalinjabinta waa faa iido weyn marka la helo shaqo; maxaa yeelay fasalada yar ee lagu bixiyo jaamacadda guud ahaan waxay naga reebaan aqoon aasaasi ah.
Dennis luis vicente isagu wuxuu leeyahay:
marka hore waad ku mahadsantahay dareenkaaga; markaa weydii iyaga inay iga caawiyaan inaan barto AUTOCAD Waxaan bartay Architecture mana haysto fursad aan ku bixiyo biilalka qaar aad ayaan kuugu mahadcelinayaa haddii aad i caawiso
SALVADOR SOLIS VIDAL isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan barto barnaamijka AutoCAD, in la cusbooneysiiyo
Waxaan arkay diaz isagu wuxuu leeyahay:
Nofeembar, 2011 at
Waxaan doonayaa inaan barto si aan ugu dhigno AutoCAD si aan xor ka aheyn.
LUIS ALBERTO GUERRERO L isagu wuxuu leeyahay:
Maarso, 2011 at
SHARCIYADA, SHAQADA BISHA
noret isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiso badan u leeyahay autocad (naqshadaha iyo sawirrada) mahadsanid
Garsoore Hugo restrepo isagu wuxuu leeyahay:
Maarso, 2010 at
Anigu waxaan ahay arday autocad ah, waxaan doonayaa inaan soo dejiyo fiidiyowyada, aad ayaad u mahadsantihiin.
YEINER isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAN KA HELI KARAA WAXA LAGU QAADO IYO WAXAAN KA HELI KARAA MACAANI AH WAXAAN KA HELI KARAA MAGACA QURAANKA
Waxay u muuqataa in boggu hoos u dhaco.
Eliana isagu wuxuu leeyahay:
Kama bixi karo fiidiyowyada mana heli karo xiriirka si aan uga diiwaangashano golaha .. sideen u sameeyaa?
Felix walter ooo ayaa soo jiidatay isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ahay ardayga injineerka waxaanan doonayaa inaan barto koorsada autocad sababta oo ah waxay muhim u tahay shaqadeyda xirfadeed, waxaanan kuugu mahadnaqayaa inaad la wadaagto koorsadan qiimaha leh aniga iyo saaxiibadayda.
jose antonio isagu wuxuu leeyahay:
Kaalintaada waa mid aad u fiican, mahadsanid saaxiib
Kelvin isagu wuxuu leeyahay:
Juun, 2009 at
antony922 isagu wuxuu leeyahay:
Maarso, 2009 at
Waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan, waxaanan jeclaan lahaa in aan noo soo dirno fiidiyo ah sida loo beddelo faylka qalafsan ee sawirada autocad
Febraayo, 2009 at
Si aad u daawato fiidiyowyada waa inaad iska diiwaangelisaa bogga isku xirka 'halkan iska qor'
Javier isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan u soo dejin karaa fiidiyowyada?
Waxaan doonayaa inaan barto shaqada shirkad dhisme
Ricardo isagu wuxuu leeyahay:
hello Waxaan u maleynayaa in autocad uu yahay mid aad u wanaagsan, waxaan ahay ardayga injineerka waxaanan ku talineynaa boggan http://www.ingenet.com.mx
Annet isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan bilaabo autocad, waxaan ahay injineer madani ah
ruben isagu wuxuu leeyahay:
tani waa mid aad u wanaagsan